रेडियो नाटकजस्तो सेल्फी किङ
नयाँ बसपार्कस्थित लोत्से महलको आईएनआई सिनेमाजमा चलचित्र ‘सेल्फी किङ’को बुधबार प्रिमियर थियो । प्रिमियर सुरु हुनु अगाडि रेडकार्पेट थियो । रेडकार्पेटमा केही कलाकारहरू चलचित्रलाई अग्रिम शुभकामना दिइरहेका थिए । चलचित्र टिमले शुभकामना लिएरहेको थियो प्रायः हास्य कलाकारको । डार्क कमेडी चलचित्र निर्देशक प्रदीप भट्टराईलाई पनि शुभकामनाका शब्द राखिदिन उद्घोषकले आग्रह गरे । नरम स्वाभावका उनले शुभकामनाका शब्द त पस्किए नै साथै चिसिएको नेपाली चलचित्रको बजारलाई ‘सेल्फी किङ’ले तताउने अपेक्षा पनि गरे । प्रदीपको अपेक्षा पूरा हुन्छ अथवा हुँदैन आइतबार हलमा पुग्ने दर्शकको सङ्ख्याले सङ्केत गर्नेछ ।
तर चलचित्र कस्तो छ ?
चलचित्र ‘सेल्फी किङ’ टेलिभिजन कमेडियनको तीन दिनको यात्राको कथा हो । काठमाडौंदेखि सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा हुने एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिन जाँदादेखि फर्किँदासम्म तीन दिनको कथा हो ।
चलचित्रका मुख्य पात्र सेल्फी किङ (विपिन कार्की) मार्फत निर्देशक विशाल सापकोटाले कथा भनेका छन् । सेल्फी किङ टेलिभिजनमार्फत दर्शकमाझ देखिन्छन् । उनकी आमा छोरालाई टेलिभिजनमा हेरिरहेको देखिन्छ । बुबा भने झिँजो मान्छन् । आमाले जबरजस्ती हेर्न आग्रह गर्छिन् । स्क्रिनमा देखेका छोरालाई हेर्दाहेर्दै बुबा हास्न थाल्छन् । हास्दाहास्दै नाकबाट रगत बग्छ । डाक्टरले ब्रेन स्टोक भएको बताउँछन् । अप्रेसन गर्ने निर्णय हुन्छ । तर सेल्फी किङ पहिला नै वचन दिइसकेको सल्लेरीको सांस्कृतिक कार्यक्रममा जान्छन् । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ चलचित्रको कथा ।
समयले गति लिन्छ तर चलचित्रले गति लिँदैन । चलचित्रको पहिलो हाफमा चलचित्र धिमा चल्छ । सेल्फी किङ चलचित्रका स्टार हुन् । यात्रामा यात्रु भेटिन्छन् उनलाई नचिन्ने एउटा पनि व्यक्ति पनि हुँदैन । के युवा, के वृद्ध के महिला सबैले चिन्छन् । सेल्फी खिच्नेको लाइन लाग्छ । होटलदेखि ट्वाइलेटसम्म । लिफ्टदेखि कार्यक्रमको स्टेजसम्म ।
उनको समाजमा इज्जत छ । मान–सम्मान छ, प्रतिष्ठा छ । तर घरमा आमाबाहेक कसैसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । तनाव छ, रक्सी पिइरहन्छन् । शौचालयदेखि स्टेजसम्म उनले रक्सी छाड्दैनन् ।
निर्देशकले स्थापित गर्न सकेका छैनन् । पीए (सहयोगी) राख्न सक्छन् तर घरमा एउटा सामान्य पानी तान्ने पम्प राख्न सक्दैनन् ।
किन ? कारण स्पष्ट पार्न निर्देशकले आवश्यक नै ठानेका छैनन् । श्रीमतीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । तर किन ? कथा चुक्छ ।
सेल्फी किङ स्टार कलाकार हुन् । तर उनलाई गाडीमा बोलाएर अरूलाई हवाइजहाजबाट बोलाउँछन्, किन ? सेल्फी किङको स्टारडम प्रस्तुत गरिएको छ, तर पोस्टरमा उनकै तस्बिर सबैभन्दा सानो छ, किन ? सेल्फी किङले असन्तुष्टि जनाउँछन् । तर किन ? चलचित्रमा कतै पनि स्पष्ट हुँदैन ।
कार्यक्रम सुरु भइसक्यो । तर स्टेजमै सेल्फी किङसहितका पफमर रक्सीमा डुब्छन् । के त्यति धेरै गैरजिम्मेवार हुन्छन्, कलाकार ?
अभिनेतामा स्थापित भइसकेको कलाकारलाई गायकका रूपमा प्रस्तुत गरेर कति जिवन्त बनाउन सकिन्छ कलाकारलाई । राजेश (विनय श्रेष्ठ) का ठाउँमा नयाँ अनुहारलाई निर्देशकले नछान्नु पनि अर्को गलत निर्णय हो ।
बुबा र छोराको सम्बन्ध स्थापित गर्न सुरुमै चुकेका निर्देशकले सेल्फी किङ (विपिन) लाई यति धेरै बोल्न लगाउँछन् । डाइलगमाथि डाइलग । दर्शकका कान टट्टाउँछन् । तर उनी बोल्न छाड्दैनन् । लाग्छ ‘सेल्फी किङ’ चलचित्र होइन रेडियो नाटक हो । उनले बोलेका कुरा दर्शकले भिजोलाइज गरेर बुझ्नुपर्छ । नायक यति हाबी हुन्छन्, चलचित्रमा निर्देशक भेटिँदैनन् । नायकले निर्देशकलाई थिचेर उपस्थिति शून्य बनाइदिएका छन् ।
चलचित्र युनिटले भन्नलाई कमेडियनको कथा भनेर प्रचार गरेको थियो । तर चलचित्रमा सेल्फी किङ कमेडियन हुन् भनेर कतै पनि निर्देशकले स्थापित गरेका छैनन् । न चलचित्र सुरु हुँदा पर्दाभित्र देखिने टेलिभिजनमा उनको कमेडी देखिन्छ, न पूरै चलचित्र भित्र नै । पात्रले गरेको मेकअप र ड्रेसअपकै भरमा कमेडियन भनेर विश्वास गरिदिनुपर्ने ? पर्दामा हेर्दा कमेडियनको होइन ‘जँड्याहा’ को कथा भन्ने बुझिन्छ ।
निर्देशकले पात्र स्थापित नगरी देखाइदिएको बिछोडको क्लाइमेक्सले मन छुँदैन । अस्पतालमै बिरामी छाडेर हिँडेपछि दर्शकले चलचित्रको क्लाइमेक्स त्यहीबेला थाहा पाइसक्छन् । कथामा सस्पेन्स क्रिएट गर्न नसक्दा चलचित्र ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।
निर्देशक कथा लेख्न चुके, एकपटक देखाइसकेको दृश्यलाई फेरि सुनाउँछन् । चलचित्र भिजुअल ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने नै बिर्सिएका छन् । पर्दामा आफूलाई देखाउन चुकेका छन् । प्रमुख पात्रलाई छाडा छाड्दा अरू कलाकार आवश्यकताभन्दा धेरै छायामा पारे ।
तर, निर्देशक विशालले ठाउँ–ठाउँमा क्यामेरा वर्कमा राम्रो काम गरेका छन् । केही सिनले मन शीतल बनाउँछ । पूर्वी पहाड पनि चलचित्र छायांकनका लागि उत्तम गन्तव्य हो भनेर देखाइ दिएका पनि छन् ।
नेपाली चलचित्र जति स्क्रिप्टमा कमजोर देखिन्छन्, त्यति नै साउन्डमा पनि । तर विशाल साउन्डमा भने सचेत देखिएका छन् । केही ठाउँमा उनले साउन्डमा लोभलाग्दो काम गरेका छन् । हलिउड चलचित्रमा प्रयोग हुने साउन्ड उनले ‘सेल्फी किङ’मा राखेका छन् । केही ठाउँमा हाम्रै मौलिक साउन्ड राखेका छन् । साउन्डमा विशाल प्रशंसाका पात्र हुन् । तर समग्र चलचित्रका लागि भने उनलाई प्रशंसाको शब्द खर्चिन सकिँदैन ।
‘सबभन्दा पहिला फिल्म प्राविधिक हिसाब र विषयमै राम्रो हुनुपर्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त्यो सिर्जनशील हुनुपर्छ । दर्शकको मनलाई छुने हुनुपर्छ’, भन्ने ताइवानी अभिनेता चाङ चेनका यो वाक्यलाई निर्देशकले सुरुमै मनन् गर्नुपर्थ्यो । तर गरेको देखिएन ।
चलचित्र : सेल्फी किङ
निर्देशक : विशाल सापकोटा
कलाकार : विपिन कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, भुवन चन्द, अभय बराल, लोकमणि सापकोटा, जीवन भट्टराई